Umaka: ukufaka izintambo | Martech Zone
Abangane bami abaningi abakule mboni sebevele basebenzisa i-wireframe besebenzisa i-Illustrator kepha i-Armature isifikile - isandiso esingu- $ 24 se-Adobe Illustrator. I-Armature ineqoqo lezinto zomqondo wezinhlelo zokusebenza zewebhu, izinhlelo zokusebenza zeselula, namasayithi ewebhu wokuhudula nokulahla okulula kwe-wireframing. Luyini ifreyimu yocingo? Ngokwe-Wikipedia: I-wireframe yewebhusayithi, eyaziwa nangokuthi uhlelo lwekhasi noma uhlelo lwesikrini, luyisiqondisi esibonakalayo esimele uhlaka lwamathambo
Mhlawumbe kufanele siqale ngalokho okushiwo yi-wireframing! I-Wireframing iyindlela yokuthi abaklami benze prototype ngokushesha ukwakheka kwamathambo ekhasini. Amafreyimu wocingo abonisa izinto ezisekhasini nobudlelwano bazo komunye nomunye, azibonisi ukwakheka okungokoqobo okuhlanganisiwe okuhlanganisiwe. Uma ufuna ngempela ukwenza umklami wakho ajabule, banikeze ngefreyimu yesicelo sakho! Abantu basebenzisa yonke into kusuka kupeni nephepha, kuya kwiMicrosoft Word, ukuya phambili
NgoMgqibelo, Novemba 20, 2010 NgeSonto, ngoFebhuwari 17, 2013 Douglas Karr
Ngonyaka odlule, bengilwela ukuthola ithuluzi le-wireframe ebelilula, lingeza amathuluzi wokusebenzisana, futhi empeleni linezinto ezisebenzisanayo ezilingisa ukuthi izinto ze-HTML nezinto zisebenza kanjani empeleni. Ukusesha kwami ​​kuvele kwaphela ngeHotgloo. Kusuka kusayithi labo: I-HotGloo uhlelo lokusebenza lwe-inthanethi olucebile olwenzelwe ukwakha amafreyimu asebenza ku-inthanethi asebenzayo wewebhusayithi noma amaphrojekthi wewebhu. Dala futhi wabe ama-prototypes asebenzisana ngokuphelele ku-inthanethi. Hlanganyela nozakwenu futhi wabelane ngokukhiphayo namakhasimende.